Politika · Jona, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Jona, 2010
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Jona, 2010
Jamaika: ‘Dudus’ eo ambany fanaraha-maso
Karaiba 30 Jona 2010
Nivoaka omaly ny vaovao fa voasambotra ihany ilay lehilahy nokarohina hatramin'ny tany Jamaika, Christopher ‘Dudus’ Coke – ny fandefasana azy any Etazonia izay mbola andrasana, hiatrika ny fiampangana azy amin'ny fivarotana rongony sy fitaovam-piadiana an-tsokosoko, dia nahatonga ny firenena handray fepetra vonjimaika dodona noho ny fifandonana teo amin'ireo voalaza ho...
Kolombia: manavotra takalon'aina 4 nalain'ny FARC an-keriny tamin'ny 1998 ny Tafika
Amerika Latina 26 Jona 2010
Tamin'ny alahady 13 Jona tamin'ny mitataovovonana, raha niomana ny hijery ny lalao fiadiana tompon-daka erantany amin'ny baolina kitra ifanandrinan'i Alemana sy Aostralia ny ankamaroan'ireo Kolombiana, nivoaka ny vaovao: minitra vitsy vao haingana, nambaran’ny Filoha Uribe ny fanavotana ny Jeneraly Luis Mendieta sy ny Kolonely Enrique Murillo, Manamboninahitra ao amin'ny Polisim-pirenen'i...
Rosia: Famakafakana ny hetraketraka atao amin'ny mpitoraka bilaogy
Rosia 25 Jona 2010
Tato anatin'ny 5 taona izao dia mpitoraka bilaogy miteny rosiana 40 eo ho eo no lasibatry ny piraty informatika (hackers) ka izany hetraketraka izany dia tarihan'ny vondrona mitondra ny anarana hoe The Brigade of Hell (Ny Brigadin'ny Afobe). Mihetraketraka ireo mpitoraka bilaogy miresaka politika sy varotra izy ireo. Raha mihena...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Jona 2010
Kenya: Maneho hevitra momba ny fanapoahana baomba tany amin'ny kianjan'i Uhuru ireo mpitoraka blaogy
Afrika Mainty 21 Jona 2010
Olona enina no maty ary 75 no naratra tamin'ilay fipoahana nandritra ny hetsika ara-politika tany Nairobi tamin'ny Alahady. Nokarakarain'ny vondrona “Tsia” io hetsika io, izay manohitra ny fampihàrana ny lalampanorenana vaovao. Ireo mpitondra fivavahana any Kenya dia nanameloka ny fitondràna tamin'iny fipoahana iny. Ny Filoha Mwai Kibaki sy ny Praiminisitra...
Japon: Nametra-pialana ny praiministra, ho ela velona anie ny mpandimby azy!
Japana 12 Jona 2010
Resaka kolikoly, kobaka am-bava, firodanan'ny firaisan'ny governemanta…ireo no antony lehibe nampitotongana ny fitiavan'ny olona ny governemantan'i Yukio Hatayoma ho 17% tamin'ny faran'ny volana may, ary nitarika ny fametraha-pialan'ny praiminisitra zapone. Andro vitsy izay no lasa taorian'ny fanambarany tamin'ny firenena ny fialany nandritra ny kabary nalefa nivantana tamin'ny fahitalavitra – izay...
Maraoka: Misy olona mitovy sata kokoa
Maraoka 04 Jona 2010
Mitovy sata daholo ny maraokana rehetra, fa misy ny Maraokana mitovy sata kokoa amin'ny hafa, raha nanoratra ilay mpitoraka bilaogy maraokana Jamal Elabiad. Niafara tamin'io famintinana io izy taorian'ny resaka kolikoly nahavoarohirohy olona ambony ao amin'ny fitondrana iray sy ny nisamborana ny zanany lahy. Toy izao no fitantaran'ilay mpitoraka bilaogy ny...